यो निर्वाचन त यसै असफल उसै असफल | नेपाल आज
यो निर्वाचन त यसै असफल उसै असफल
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा मतदाताको संख्या १ करोड ५४ लाख २४ हजार भन्दा अलिकति बढी छ । ६८ सालमा भएको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६८ लाख थियो । अर्थात अहिले ३ करोड नेपाली छौं भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । यसर्थ अहिलेको निर्वाचनमा ५० प्रतिशतको नाम मात्रै मतदाता सूचीमा छ ।
१ करोड ५४ लाख मतदातामा ३० देखि ४० लाख युवा विदेशमा छन्, जो आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएपछि अन्यत्र पसिना बगाइरहेका छन् । पढ्न र एनआरएनका रुपमा विदेशमा रहनेहरुको संख्या बेग्लै छ । १ करोड ५४ लाखमा ४० लाख घटाउँदा १ करो १४ लाख हुन जान्छ । जुन कूल जनसंख्याको ३८ प्रतिशत मात्रै हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत त बदर नै भयो । अर्थात यसपटक पनि त्यस्तै भयो भने जम्मा ३६ प्रतिशतको मत मात्रै वैध हुनेछ ।
६४ प्रतिशत जनता सहभागी नै नभएको निर्वाचन असफल नै भइसकेको छ । त्यति मात्रै होइन अब शासन गर्ने भनेको १८ प्रतिशत मतले हो । किनभने मतदान हुनेछ ३६ प्रतिशतबाट । सोको सामान्य बहुमत ५१ प्रतिशत हुने हो । त्यो भनेको १८ प्रतिशत प्लस मत हो । १८ प्रतिशतले शासन गर्नकालागि अहिले भइरहेको निर्वाचन आफैमा कसरी सफल हो ? यो प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ ।
निर्वाचन असफल बनाउन कही तत्वले बम विष्फोट गराउने, निशस्त्र मानिसहरुलाई घाइते बनाउने, हत्या गर्नेसम्मको नियत साँधेको देखियो । हामी सबै भगवानका सन्तान हौं । त्यसमाथी हामी नेपालीहरु एउटै मातृभूमि नेपालका सन्तान पनि हौं । यसअर्थ दाजुभाई हौं । एउटा भाईले अर्को भाई मार्ने संस्कृतिलाई नेपाली समाजले कदापी सहन सक्दैन । त्यस्ता तत्वहरुले यो पवित्र नेपाल भूमिबाट विदा लिनु पर्ने समय अवश्य आउनेछ । जब पापीहरुले यो देश भरिनेछ, त्यो बेला भगवानले पापीहरुको संहार गर्न आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु हुनेछ । नेपाल त भगवान शिवको भूमि हो । यी पापीहरुले सजाय अवश्य पाउनेछन् ।
यसो भन्दैमा हामी अहिलेको निर्वाचनको पक्षमा जानु पनि महाभूल हुनेछ । किनभने यो संविधानले राजसंस्था र हिन्दुधर्ममात्रै बेचेको छैन, उसले त देश टुक्रा पार्ने खतरनाक भाइरस पनि आफ्नै साथमा राखेको छ । यो दूषित नियतले, विदेशीका एजेन्ट र क्रिष्चियनको पैशा खाएकाहरुले जारी गरेको संविधान हो । जहाँ अहिले पनि एकाथरी देशद्रोहीहरु बहुराष्ट्रको प्रावधान थप्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई के विश्वास छ भने बहुराष्ट्रको धारणा स्थापित गर्न सकियो भने यो देशलाई पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रा पारे झै टुक्रा पार्न सकिनेछ ।
बहुराष्ट्रको कुरा मात्रै छैन यो संविधानमा । यो संविधान मूलतः मुलुकको सर्वाभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्न असक्षम हुने किशिमको छ । मुलुको संघीयता नै देश टुक्रा पार्ने आधार हो । संघीयता नभएका कारण यो मुलुकको विकास नभएको भन्ने यदि कोही विकासविद छ भने मेरो अगाडि आए हुन्छ । विकासको अवरोध एकात्मक राज्य व्यवस्था हो भन्ने व्यक्ति मेरो अगाडि आए हुन्छ । कुनै पनि व्यवस्था विकासको अवरोधक थियो भन्ने हिम्मत यदि कसैमा छ भने त्यो व्यक्ति मेरो अगाडि आए हुन्छ ।
पञ्चायती व्यवस्था, राजासहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कहिले पनि विकास विरोधी र जनता विरोधी थिएनन् । त्यो व्यवस्थाका ठेकेदार राजनीतिक दलहरु विकास विरोधी थिए । उनीहरुको भ्रमको खेती श्री ५ ज्ञानेन्द्र सरकारले केही समयको लागि खोसिदिँदा उनीहरुले मौसुफलाई निरंकुश प्रमाणित गरिदिए । जनतामा मौसुफ सरकारको वास्तविक छवि पुग्नै पाएन । विदेशीको दानापानीमा जिउनेहरुले जे प्रचार गरे त्यो मात्रै जनतामा पुग्यो ।
यसकारण मुलुकलाई कहिले पनि संघीयता चाहिएको थिएन ।
धेरै मानिसहरु ठान्छन् कि नेपालको विकास अवरोधक राजसंस्था हो । यदि राजसंस्थाले नै विकास रोकेको हो भने बितेका १० वर्षमा किन कुनै विकास भएन ? राजसंस्था कहिले पनि विकासको बाधक थिएन । बाधक त यी नेता र दलहरु थिए । आफूले जनहितमा कुनै काम गर्न नसकेपछि उनीहरुले दोष राजसंस्थालाई लगाए । नेपालको राजसंस्था सदैव जनहितमा नै केन्द्रीत भयो । तर यो कुरा जसलाई थाहा थियो,उनीहरुले जनतालाई भनिदिएनन् । राजाको शासनकालमा राजाको भक्त भएको नाटक रचेर शासनमा गए । राजसंस्था हट्ने बेला चुपचाप बसे । गणतन्त्रको युगमा उनीहरु नै गणतन्त्रवादी बनेर फेरि सत्तामा गए । यसकारण म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि राजाको नाममा, हिन्दुत्वको नाममा राजनीति गर्ने, भोट माग्नेहरु देखि सावधान । यस्ता अवसरवादीले नत राजालाई परेको अन्यायको विपक्षमा बोल्न सक्छन् । न त नेपाली जनताको अगाडि इमान कायम गरेर जनहितमा काम गर्न सक्छन् ।
राजा र राजाको नाममा जनता झुक्याउने ठगहरुदेखि सावधान । राजसंस्थाको पक्षधर देखिने तर कुनै विशेष राजनीतिक दललाई भोट दिनू भन्नेहरुदेखि पनि सावधान भन्न चाहन्छु । नेपालको राजसंस्था त्यसमाथि राजा महेन्द्रलाई एकात्मक राज्य व्यवस्था लागू गरेको भनेर आलोचना गर्ने मधेसवादी दलहरुलाई भन्न चाहन्छु, तिम्रो मधेसमा राजमार्ग कसले बनाइदियो ? तिम्रा इष्टदेवले हुलाकी राजमार्गको जिम्मा लिएको कति भयो ? के अहिलेसम्म हुलाकी राजमार्ग बन्यो ? महेन्द्र राजाले चाहेको भए पहाडी लोकमार्ग बनाउने सक्थे । तर मधेसकै जनतालाई सुविधा हुने गरी राजमार्ग बनाए । के त्यो मधेस विरोधी कर्म थियो ?
( शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतसँगको कुराकानीमा आधारित)